Multisave: သင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုအမျိုးမျိုးသော format များဖြင့်သိမ်းဆည်းပါ Linux မှ
Multisave - သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်သိမ်းပါ
အသုံးပြုသူများသည် OpenOffice o LibreOffice ဖိုင်များကို ODF ပုံစံဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော် MS Office ၏နောက်ဆုံးထွက်မူကွဲများသာဤ (အခမဲ့) ပုံစံကိုထောက်ခံသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြိမ်အနည်းငယ်လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ ပေးပို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များကို အခြားပုံစံများ.
ဤကိစ္စရပ်များအတွက် OpenOffice / LibreOffice အတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးချဲ့ချက်တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစာရွက်စာတမ်းများကိုတစ်ချိန်တည်းပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်တစ်ပြိုင်တည်းသိမ်းဆည်းခြင်းအားဖြင့်အချိန်ကုန်သက်သာစေသည်။
1.- ဒေါင်းလုပ် LibreOffice extension စာမျက်နှာမှ extension ။
2.- ထို့နောက် OpenOffice / LibreOffice ကိုဖွင့်ပြီး Tools> Extensions Manager သို့သွားပါ။
3.- ငါ extension ကိုနှင့် voila ကဆက်ပြောသည်။ ငါတို့အသုံးပြုသော Save ခလုတ်ဘေးတွင်အိုင်ကွန်တစ်ခုပေါ်လာမည်။
4.- သင်ရွေးသောအခါ၊ သိမ်းဆည်းခြင်းရွေးစရာများနှင့်အတူပြတင်းပေါက်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။
5.- လမ်းကြောင်းရှာပါ၊ နာမည်ထည့်ပါ၊
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Multisave - သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်သိမ်းပါ
Cesar Alonso Pena ဟုသူကပြောသည်
ဂရိတ် !!! ဒါကြောင့်ငါစာရွက်စာတမ်းများကိုနှစ်ကြိမ်သိမ်းစရာမလိုပါ !!!
César Alonso Peñaအားပြန်ပြောပါ
Slackware 14: တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်
ကျူးဘားရှိ Linux နှင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ